Result page 1 for ရန်ကုန် ရှိ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် သိုလှောင်လုပ်ငန်း မှ
အလုပ် 59 ခုကို တွေ့ရှိပါတယ်။
လွန်ခဲ့သော 42 မိနစ် က
Male (3 - Posts)
Male / Female (1 Post)
Any Graduate(B.Com /BE.Com/BAct preferred) Age between 24 to 35 years old. Must be able to use Advanced Excel Must be passed LCCI Level(III) -Previous minimum (3) years’ experiences in the area of financial accounting and related experience in production account field. Able to use the accounting software.(Peach Tree )
Architectural Designer Associate (Eastern Foundation Co.,Ltd)
QS Associate Engineer (Eastern Foundation Co.,Ltd)
QS Cum Contract Manager (Eastern Foundation Co.,Ltd)
ရန်ကုန် အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား MMK 1,500,000 - 2,000,000
Architecture Senior Manager (Eastern Foundation Co.,Ltd)
Interior Designer Associate (Eastern Foundation Co.,Ltd)
Job duties ofasupply chain assistant include checking inventory, filling orders, ensuring the quality of products, and preparing invoice.
Admin Cum Logistics Supervisor Male / Female (1) post
Can handle Operation & Logistics job. Good communication & Team work skill
Purchaser (Thilawa)- Urgent
Purchasing materials and build relationships with overseas suppliers.
ကုန်ပစ္စည်း နှင့် စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ2ကုန်သွယ်ရေး နှင့် ၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်များ 1 စာရင်းကိုင် ၊ စာရင်းစစ် နှင့် ငွေကြေးအလုပ်အကိုင်များ 10 စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်အကိုင်များ5ဆော့ဗ်ဝဲ နှင့် အချက်အလက် ဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ 1 ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အာမခံ အလုပ်အကိုင်များ 1 ထောက်ပံ့ရေး နှင့် ၀ယ်ယူရေး အလုပ်အကိုင်များ5ရောင်း၀ယ်ဖောက်ကားခြင်း နှင့်ဆက်သွယ်ရေး အလုပ်အကိုင်များ2အင်ဂျင်နီယာ နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်များ 21 အဆောက်အဦးပိုင်း နှင့် ဗိသုကာ အလုပ်အကိုင်များ 1 အရောင်း နဲ့ပက်သက်တဲ့အလုပ်အကိုင်များ5အုပ်ချုပ်မှု နှင့် ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ 5
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် သိုလှောင်လုပ်ငန်း 59
စာချုပ်ဖြင့်လုပ်ကိုင်နိုင်သေ 1 အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား 58
Expats Preferred 13 Repats Preferred 9